छुटका नाममा ओली सरकारको यत्रो झूट
दुई पाङ्ग्रे सवारीमा व्यापक कर कटौती, कुन मोटरसाइकलको मूल्य कति घट्यो ?
सरकारले बजेटमार्फत दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । गत शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा लाग्ने सडक दस्तुरमा अधिकतम १…
काठमाडौंमा विकास बैंकका कुन शाखा कुन दिन खुल्ने ? (सूचीसहित)
कोरोनाको संक्रमणदर बढेसँगै काठमाडौंमा आजदेखि २१ गतेसम्म विकास बैंकहरुका सिमित शाखामात्र खुल्ने भएको छ । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसियसनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र विकास बैंकहरुका शाखा कार्यालयहरु खुल्ने समय विहान १० वजे देखि…
नयाँ स्वाद पस्किँदै भिभान्ता
काठमाडौं । होटल ‘भिभान्ता काठमाडौं’ले आतिथ्य क्षेत्रमा नयाँ स्वाद पस्किने क्रमलाई निरन्तता दिएको छ । भिभान्ताले आफ्ना ग्राहकको प्रिय मिन्ट रेस्टुरेन्टमा नयाँ मेन्युमार्फत् नयाँ स्वाद पस्किएको हो । कोरोना महामारीमाबाट ग्रसित आतिथ्य…
एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा जोशीको उम्मेदवारी
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर पदका लागप हरिप्रसाद जोशीले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । सन् २०२१-२०२३ कार्यकालका लागि जोशीले उम्मेदवारी दिने बताएका हुन्…
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको सकारात्मक रुपान्तरणका लागि प्रशंसनीय खोज तालिम
जनकपुर । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको संस्थागत विकासका लागि सकारात्मक खोजसम्बन्धी तीन दिने कार्याशाला जनकपुर उपमहानगरपालिका र सुदृढ परियोजनाको सहकार्यमा सम्पन्‍न भएको छ । २०७७ साल चैत्र ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म सञ्‍चालित उक्त कार्यशालामा…
एलआईसी नेपालको अभिकर्ता सम्मान तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
धनगढी । एलआईसी नेपालले अभिकर्ता सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । एलआईसीको धनगढी शाखाले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलपी दासको प्रमुख आतिथ्यतामा अभिकर्ता सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो…
आगलागीबाट क्षति भएको फर्निचर उद्योगलाई डडेल्धुरा जेसिजको एक लाख सहयोग
काठमाडौं । धनगढीमा रहेको फर्निचर उद्योगमा आगलागीबाट भएको क्षतिलाई कम गर्न डडेल्धुरा जेसिजले सहयोग गरेको छ । फागुन २२ गते धनगढीस्थित आलोक मल्टि कन्सर्न प्रालिमा भएको भिषण आगलागीमा डडेलधुरा जेसिजले सहयोग गरेको…
नव बिहानी सहकारीको साधारण सभा सम्पन्‍न
डोटी । नव बिहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सलेनाको १० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्‍न भएको छ । केआइसिंह गाउँ पालिकका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गरेका…
टाटा मोटर्सको नयाँ फरएभर रेन्जका गाडीहरु अब इटहरीमा
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालि ले फरेवर रेन्ज अन्तर्गत पर्ने पाँच वटा नयाँ गाडीहरु फागुन २८ गते शुक्रबार इटहरीमा नाडा एसोसियसन पूर्वाञ्‍चलका अध्यक्ष सुवास आचार्यको…